Ingilazi yokushisa ukushisa ingubo ingubo elungiselelwe ngokucubungula into eyodwa noma eziningana ze-nano-powder. Izinto ze-nano ezisetshenzisiwe zinezici ezikhethekile ze-optical, okungukuthi, zinezinga eliphakeme lokuvimbela ezindaweni ze-infrared ne-ultraviolet, kanye nokudluliswa okuphezulu esifundeni sokukhanya esibonakalayo. Usebenzisa izakhiwo zokuvikela ukushisa ezisobala zalolo lwazi, luxubene nama-resins asebenza kahle emvelweni, futhi kucutshungulwe ubuchwepheshe obucutshungulwayo bokulungiselela ukonga amandla nokonga imvelo okuvikela imvelo. Ngaphansi kwesisekelo sokungathinti ukukhanyisa ingilazi, kufinyelele kumthelela wokonga amandla nokupholisa ehlobo, nokonga amandla nokonga ukushisa ebusika.
Eminyakeni yamuva nje, ukuhlola izinhlobo ezintsha zezinto zokwakha ezishisayo zokuvikela imvelo bekulokhu kuyinjongo elandelwa ngabaphenyi. Lezi zinto zinamathemba abanzi kakhulu wokusebenza emikhakheni yokonga amandla okwakha okuluhlaza kanye nemoto ingilazi ukushisa ukwahlukanisa-nano powder nezinto zokusebenza zefilimu ezinokukhanya okuphezulu okubonakalayo futhi ezingangena ngempumelelo noma zibonise ukukhanya okuseduze kwe-infrared. Lapha sethula ikakhulukazi ama-nanoparticles wethusi we-cesium tungsten.
Ngokwamadokhumende afanele, amafilimu asobala aqhubayo afana ne-indium tin oxide (ITOs) nama-antimony-doped tin oxide (ATOs) amafilimu asetshenzisiwe ezintweni ezisobala zokuvikela ukushisa, kepha angavimba kuphela ukukhanya okune-infrared ngamaza amaza amakhulu kunama-1500nm. I-Cesium tungsten bronze (CsxWO3, 0 ＜ x ＜ 1) inokukhanya okuphezulu okubonakalayo okukhanyayo futhi kungangena ngokuqinile ukukhanya ngamaza we-wavelength angaphezu kwe-1100nm. Lokho kusho ukuthi, uma kuqhathaniswa nama-ATO kanye nama-ITOs, i-cesium tungsten bronze inokushintsha okuluhlaza okwesibhakabhaka esiqongweni sayo sokumunca esine-infrared, ngakho-ke ihehe ukunakwa okuningi.
Ama-nanoparticles wethusi we-Cesium tungstenbabe nokuhlushwa okuphezulu kwabathwali bamahhala nezakhiwo ezibonakalayo ze-optical. Banokudlulisela okuphezulu esifundeni sokukhanya okubonakalayo kanye nomphumela oqinile wokuvikela esifundeni esiseduze ne-infrared. Ngamanye amagama, izinto zethusi ze-cesium tungsten, njenge-cesium tungsten bronze ebonakalayo yokumboza ukushisa, ingaqinisekisa ukudluliswa kokukhanya okuhle (ngaphandle kokuthinta ukukhanyisa) futhi ingavikela ukushisa okukhulu okulethwa ukukhanya okuseduze kwe-infrared. I-coefficient α yokumunca inani elikhulu labathwali bamahhala kuhlelo lwe-cesium tungsten bronze lilingana nengxube yenethiwekhi yamahhala nesikwele sobude bokukhanya kokumunca, ngakho-ke lapho okuqukethwe kwe-cesium ku-CsxWO3 kukhuphuka, ukuminyana kwabathwali bamahhala ku uhlelo lukhula kancane kancane, ukuqiniswa kokumunca esifundeni esiseduze ne-infrared kusobala kakhulu. Ngamanye amagama, ukusebenza kwe-infrared shielding performance ye-cesium tungsten bronze kuyanda njengoba okuqukethwe kwayo kwe-cesium kukhuphuka.